Zorin OS 12 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura iyo yakadzikama vhezheni yeimwe inoshamisa zvikuru kugoverwa maererano neesesthetics nemabasa yakatangwa, ndinoreva Zorin OS 12. Iyi vhezheni itsva ichiri pamusoro peUbuntu, mune ino kesi Ubuntu 16.04 uye zvakare ine maviri maBhaibheri: Core uye Yekupedzisira.
Asi zvakare ichokwadi kuti inozivikanwa nekuve iyo yakagadzikana uye yakavandudzwa vhezheni yezvose izvo Zorin OS inayo. Zvichida imhaka yechikonzero chayo, kana nekuda kweiyo kernel nyowani kana zvakare nekuda kwemabasa ayo matsva.
Zorin OS 12 ine inogadziridza uye mabhenefiti anouya nekuve ne as base Ubuntu 16.04 asi ivo vafunga zvakare kumutsiridza iyo Zorin Desktop, desktop iyo yakavakirwa paGnome Shell uye iyo yatora yakakwana kutendeuka. Kune rumwe rutivi mifananidzo nyowani yakavakirwa pa bepa, iyo inozivikanwa yeGnu / Linux theme. Uye zvakare, Zorin Desktop yaita shanduko kune ayo ekumisikidza mapaneru, ese achitsiviwa neayo imwe chete apo mushandisi anogona kumisikidza iyo yakazara desktop interface. Asi haisiriyo yega yeruzivo yeshanduro.
Zorin OS 12 ichave neyakawiriraniswa neakaundi yedu yeGoogle Drive
Chromium ichave iyo browser yekuparadzira, chimwe chinhu chichava chinobatsira kugona kuve neappapps pane desktop. Iyo desktop yakavakirwa paGnome Shell uye iyo inotorwa mukana nayo. Saka Zorin OS 12 ine makuru ekushandisa maGnome akadai seGnome Mifananidzo, Gnome Mepu, Gnome Mamiriro ekunze, Gnome Vhidhiyo uye kunyange tinogona kuenderana mafaera edu neGoogle Drive.
Chimwe chinhu chitsva cheZorin OS 12 ndiko kusanganisa kwemaitiro mune zviito nedesktop. Nekudaro, iyo desktop ichapindura kana tikadhinda neminwe mitatu, nemichina mina kana miviri, sekunge yaive chidzitiro chefoni. Izvi zvinobatsira pamakomputa ari mahwendefa, malaptop, kana ane yekubata skrini. Chinhu chiri kukura asi chisati chakakosha zvakakwana.
Chero zvazviri, Zorin OS 12 iri yekuparadzira yemahara saka tinogona kurodha nekuyedza pasina chero kuzvipira, kwese kuburikidza zvinyorwa zvekuburitsa. Ini pachangu ndinofunga kuti Zorin OS kugovera kukuru uye mhinduro kune avo vasingade kumisikidzwa kwenguva refu uye vasina hanya neGnome Shell desktop, kune vamwe vese, panogona kunge paine dzimwe nzira dziri nani Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Zorin OS 12 yave kuwanikwa
Jose Miguel Moreno chigadziri chemufananidzo akadaro
Ndakaiisa mumhepo yeMacbook kubva kupera kwa2010, uye haina kugadzikana, inogara yakavharika, zvikanganiso zvemifananidzo
Pindura kuna Jose Miguel Moreno
Ini ndakaiisa sezvo vhezheni 9 yakabuda uye ndinoida, sezvo ini ndakaona kuti World of Warcraft inomhanya zvirinani kupfuura Windows ndiyo yega system yandinoshandisa, yakagadzikana uye inokurumidza.